ချစ်သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ရည်စူးကုသိုလ်တွေပြုပေးနေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် – Shwe Likes
ချစ်သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ရည်စူးကုသိုလ်တွေပြုပေးနေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်
သရုပ်ေ ဆာင် ညီထွဋ်ခေါ င်ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီ ဒီယိုဇာတ် ကားတွေမှာ ကျေ ရာက်ဇာ တ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံးသ ရုပ်ဆော င်နိုင်သူ တစ်ယောက်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်။
ညီထွဋ်ခေါင်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအ လုပ်တွေ ကို ရပ်နားထားပြီး ကွယ်လွန်သွား တဲ့ချစ်သူအ တွက် သတိရတမ်းတရင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုကို ယ် နှစ်သိမ့်ေ နရတာပြဲ ဖစ်ပါတယ်။
သိပ်ချစ်ရတဲ့ချ စ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီး အတူမနေရခင်မှာပဲ ချစ်သူက လူ့လော ကကြီးထဲက နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ သွားတာမို့ ပိုလို့ကြေ ကွဲနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ လည်း ညီထွဋ်ခေါင်က သူ့ရဲ့ဘဝထဲကေ န နှုတ်ဆက်ထွက် ခွာသွားတာ (၈) လတိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး သံဃာေ တာ်တွေကို ဆွမ်းကပ်ကုသိုလ် ယူခဲ့တဲ့အကြော င်းကို “ဒီနေ့ ၈ လပြည့်ပြီ။ တကယ်မရှိတော့ဘူး ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း…. ရည်စူး ကုသိုလ်ပြုပါတယ် မေ… လွမ်းတယ် …” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ညီထွဋ်ခေါင်ကတော့ သေကွဲကွဲခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူကို သတိရတမ်းတရင်းနဲ့ပဲ (၈) လတိတိပြည့်ခဲ့ပြီဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်။ ညီထွဋ်ေ ခါင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဒီဘဝမှာ စောေ စာစီးစီးနှုတ်ဆက် ခဲ့ရပေမယ့် နောင်ဘဝဆက်တိုင်းမှာ ပေါင်းဖက်နိုင်ြ ကပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ Source: Nyi Htut Khaung’s fb
သ႐ုပ္ေ ဆာင္ ညီထြဋ္ေခါ င္ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီ ဒီယိုဇာတ္ ကားေတြမွာ ေက် ရာက္ဇာ တ္႐ုပ္ကို အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အပီျပင္ဆုံးသ ႐ုပ္ေဆာ င္နိုင္သူ တစ္ေယာက္ျပဲ ဖစ္ပါတယ္။
ညီထြဋ္ေခါင္ဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ အႏုပညာအ လုပ္ေတြ ကို ရပ္နားထားၿပီး ကြယ္လြန္သြား တဲ့ခ်စ္သူအ တြက္ သတိရတမ္းတရင္း ကိုယ့္စိတ္ကိုကို ယ္ ႏွစ္သိမ့္ေ နရတာျပဲ ဖစ္ပါတယ္။
သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ခ် စ္သူနဲ႔ ေရႊလက္တြဲၿပီး အတူမေနရခင္မွာပဲ ခ်စ္သူက လူ႔ေလာ ကႀကီးထဲက ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာ သြားတာမို႔ ပိုလို႔ေၾက ကြဲေနခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာ လည္း ညီထြဋ္ေခါင္က သူ႔ရဲ့ဘဝထဲေက န ႏႈတ္ဆက္ထြက္ ခြာသြားတာ (၈) လတိတိျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူအတြက္ ရည္စူးၿပီး သံဃာေ တာ္ေတြကို ဆြမ္းကပ္ကုသိုလ္ ယူခဲ့တဲ့အေၾကာ င္းကို “ဒီေန႔ ၈ လျပည့္ၿပီ။ တကယ္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာ လက္ခံနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း…. ရည္စူး ကုသိုလ္ျပဳပါတယ္ ေမ… လြမ္းတယ္ …” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ပါတယ္။
ညီထြဋ္ေခါင္ကေတာ့ ေသကြဲကြဲခဲ့ရၿပီျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူကို သတိရတမ္းတရင္းနဲ႔ပဲ (၈) လတိတိျပည့္ခဲ့ၿပီဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ညီထြဋ္ေ ခါင္တို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ဒီဘဝမွာ ေစာေ စာစီးစီးႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ရေပမယ့္ ေနာင္ဘဝဆက္တိုင္းမွာ ေပါင္းဖက္နိုင္ျ ကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Source: Nyi Htut Khaung’s fb
ရင်ဘတ်ချင်းနီးတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဝမ်းသားစရာ သတင်းေ ကာင်းလေးပါး လိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
အိမ်ဖောက်ခံရလို့ ရှိသမျှကုန်ပြီလို့ပြောပြီး ပြင်ဦးလွင် က ခြံကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အပေါ် ဝေဖန်ခံနေရမှုကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ Live ဗီဒီယိုလေး